A na-eji edemede ngbanwe iji gbasaa otu ụlọ ọrụ
Porationlọ ọrụ ma ọ bụ LLC ga-etinye akwụkwọ asambodo ma ọ bụ isiokwu nke mgbasa ya na steeti ahụ iji kwụsị ịdị adị nke ụlọ ọrụ ahụ. Lọ ọrụ agbakwunyere ga-enyere gị aka ịdepụta eserese ndị a na steeti 50 ọ bụla na ụfọdụ ebe ndị si mba ọzọ.
Ree Corporationlọ ọrụ gị / ụlọ ọrụ gị
N'ụfọdụ oge ịdị adị ụlọ ọrụ gị nwere ike iji ndị mmadụ na-achọ itinye ụlọ ọrụ agadi. Lọ ọrụ Incorporated nwere ike ịzụtara gị ụlọ ọrụ gị maka ịdepụta na ndekọ ụlọ ọrụ anyị ochie. Kpọtụrụ anyị taa iji hụ ma ị tozuru iji zụọ azụmaahịa gị.